Orinasa ara-barotra tsotra ve ianao sa orinasa manana orinasa manokana?
Isika no tena matihanina mpanamboatra milina hatsaran-tarehy, izay manana ekipa famokarana, R&D ekipa, varotra hery sy aorian'ny-varotra ekipa fanompoana.
Ny orinasanay dia any Suzhou, tanàna fampandrosoana haingana izay manana anaram-bosotra hoe "zaridaina ao ambadiky ny Shanghai".Raha misy ny fotoananao, dia raisina an-tanan-droa ny ho avy any Shina hitsidika ny orinasanay!
Manana antoka ve ianao?
Eny Manana isika.Warranty herintaona amin'ny milina mpampiantrano dia omena.Warranty fanoloana maimaim-poana telo volana ho an'ny tahony, loha fitsaboana ary kojakoja.
Ahoana raha misy olana momba ny kalitao mandritra ny vanim-potoana fiantohana?
Ny ekipa mpanohana ny teknolojia matihanina dia afaka manome rindrambaiko fanavaozana maimaim-poana isaky ny 3 ~ 6 volana.ho an'ny serivisy ara-potoana.Afaka mahazo ny fanampiana ilainao ara-potoana ianao amin'ny alàlan'ny telefaona, webcam, chat an-tserasera (Google talk, Facebook, Skype).Azafady mba mifandraisa aminay rehefa misy olana ny milina.Ny serivisy tsara indrindra dia hatolotra.
Inona no certificat anananao?
Ny milina rehetra dia manana ny fanamarinana CE izay miantoka ny kalitao sy ny fiarovana.Ny milinanay dia eo ambany fitantanana kalitao hentitra mba hiantohana ny kalitao avo indrindra.
Inona no tokony hataoko raha tsy mahay mampiasa ilay milina aho?
Manana horonan-tsarimihetsika sy torolalana ho an'ny fampiasanao izahay.
Inona ny fonosana?
Fonosana Foam, fonosana boaty Aluminum, na araka ny takian'ny mpanjifa.
Ahoana ny amin'ny entana?
Afaka manonta ny Logo-ko amin'ny vokatra ve isika?
Eny, manohana OEM izahay.Ampio ny anaran'ny fivarotanao, Logo
Fiteny inona no tohanan'ny rindrambaiko?
Manohana fiteny maro izahay
Afaka manamboatra ny rafitra rindrambaiko ve isika?
Eny, manome serivisy OEM & ODM izahay